မွန်ပြည်နယ် - ဝီကီပီးဒီးယား
မြန်မာနိုင်ငံ‌အောက်ပိုင်းရှိ မွန်တိုင်းရင်းသားအများစုနေထိုင်ရာ ပြည်နယ်။
မွန်၊ ဗမာ၊[ကရင်လူမျိုး၊ ပအိုဝ်းတောင်သူ လူမျိုး
၂ တည်နေရာ နှင့် အကျယ်အဝန်း
၃.၅ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရှေ့တောင်ပိုင်း ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သော မွန်ပြည်နယ်၏ အနောက်ဘက် နယ်နိမိတ်ကို ကပ္ပလီပင်လယ်၊ မြောက်ဘက်ကို ပဲခူး၊ အရှေ့ဘက်ကို ကရင် နှင့် တောင်ဘက်ကို တနင်္သာရီတို့က ဝိုင်းရံလျက်ရှိသည်။ မွန်ပြည်နယ်သည် စတုရန်းကီလိုမီတာ ၁၂၂၉ ကျယ်ဝန်းပြီး၊ မြို့နယ် ၁ဝ မြို့နယ်ပါဝင်ကာ၊ မော်လမြိုင်သည် မြို့တော်ဖြစ်သည်။ လူဦးရေမှာ ၂.၁၂ သန်း (၂ဝ၁၁ HMIS အချက်အလက် များအရ) ရှိပြီး၊ စတုရန်း ၁ ကီလိုမီတာလျှင် လူဦးရေ သိပ်သည်းမှုနှုန်း ၁၇၂ ဦးရှိသည်။ လူဦးရေ၏ ၂၃% သည် မြို့ပြ ဒေသများတွင် နေထိုင်ကြပြီး၊ ကျန်ရှိသော ၇၇% မှာ ကျေးလက် ဒေသများတွင် နေထိုင်ကြသည်။ 
၂၀၁၁ခုနှစ်မှစတင်ကာ ဝန်ကြီးချုပ်အမှူးပြု​​သော ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က မွန်ပြည်နယ်အား အုပ်ချုပ်သည်။၂၀၂၁ခုနှစ် စစ်အာဏာသိမ်းမှုအပြီးတွင် မွန်ပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်​ရေး​ကောင်စီမှ အုပ်ချုပ်လျက်ရှိသည်။
အခြားကြည့်ရန်။ မွန်ပြည်နယ် လွှတ်တော်
အခြားကြည့်ရန်။ မွန်ပြည်နယ် တရားလွှတ်တော်
မွန်ပြည်နယ် တရားလွှတ်တော်ကို တရားသူကြီးချုပ် (၁)ဦး၊ တရားသူကြီး (၂)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်အောက်တွင် ခရိုင်တရားရုံး (၂)ရုံး၊ မြို့နယ်တရားရုံး (၁၀)ရုံးရှိသည်။
ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာပြင်ဆင်
၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မွန်ပြည်နယ်တွင် လူဦးရေ ၂သန်း နေထိုင်ကြသည်။ မွန်ပြည်နယ်တွင် မဦးရေသည် ကျားဦးရေထက် အနည်းငယ် ပိုများသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆမှာ တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာတွင် ၁၆၇ဦးဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်၊မန္တလေးနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းတို့ပြီးလျှင် စတုတ္ထမြောက် လူဦးရေ အသိပ်သည်းဆုံးဖြစ်သည်။ မွန်ပြည်နယ်တွင် လူ၁၀၀လျှင် ၇၂ဦးသည် ကျေးလက်တွင် နေထိုင်ကြသည်။
အတ္ထရံမြစ်ကူး (စံပယ်ဂူ) တံတား
မော်လမြိုင်တွင် ရုပ်မြင်သံကြားထပ်ဆင့်လွှင့် ဌာနခွဲတစ်ခုရှိကာ GSM ဖုန်းများကိုလည်း သုံးစွဲနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ မွန်ပြည်နယ်တစ်ဝန်း တွင် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် စခန်း ၉ ခုတိတိ ရှိသည်။ မွန်ပြည်နယ်တွင် ဆက်သွယ်ရေးအတွက် မိုဘိုင်းအသုံးပြုနိုင်သော ကွန်ရက်များမှာ MPT, Telenor, Ooredoo, Mytel, MEC တို့ဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင် အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးအတွက် MPT, Telenor နှင့် Ooredoo တို့မှလည်း အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးကို FTTH လိုင်းသာမက Wireless Broadband များဖြင့်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်ထောင်စု သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာ။ အတွဲ-၂။ နေပြည်တော်: လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန။ မေ ၂၀၁၅။ pp. ၁၇။
↑ မွန်ပြည်နယ်၏ နောက်ခံသမိုင်း။ မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့။ 11 February 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၅ မတ် ၂၀၁၇ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ [https://web.archive.org/web/20140601061122/http://www.modins.net/myanmarinfo/state_division/mon.htm Archived 1 June 2014 at the Wayback Machine. MODiNS [ Myanmar Online Information ]]
↑ မွန်ပြည်နယ်၏ ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ။ မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့။ 11 February 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၅ မတ် ၂၀၁၇ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မွန်ပြည်နယ်&oldid=729891" မှ ရယူရန်
၁၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၀၆:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၀၆:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။